Gudiga doorashooyinka iyo xuduudaha kenya ayaa digniin ujeediyay mucaaradka cord | Risala FM-The Voice of Horn Africa
Gudiga doorashooyinka iyo xuduudaha kenya ayaa digniin ujeediyay mucaaradka cord
Gudiga doorashooyinka iyo xuduudaha dalka ee IEBC ayaa uga digay isbaheysiga mucaaradka dalka ee cord inay sii wadaan qorshahooda ay ugu magac dareen qorshaha march.
Gudiga doorashooyinka dalka iyo xuduudaha ayaa sheegay in aftida OKOA ee ay dabada ka riixayeen mucaaradka aysan gaarin cadadkii aftida loogu talagalay oo aheeyd inay la yimaadaan hal milyan oo saxiixayaal ah.
maanta o taariikhdu ku beegantahay 25-ta bishan april ayaa mucaaradku waxay uqabteen gudiga doorashooyinka iyo xuduudaha inay siiyaan jawaab lagu qancikaro oo ku aadan aftidodii la diiday inay horey usocoto sababta dhalisay.
lakiin gudiga soohdimaha iyo doorashooyinka dalka ayaa sheegay in iyagu aysan qaadan doonin tilmaamaha qofkasta oo kasoo horjeedo waajibaadkooda.
sidookale gudiga soohdimaha iyo doorashooyinka dalka ayaa waxay sheegeen in hanjabaadaha ka imaanaaya mucaaradka ay yihiin kuwa nasiib daro ah oon loo baahneyn.